नेपाल–भारत सम्बन्ध अब सहज रुपमा अघि बढ्छ: केभी राजन - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
| ३ साउन २०७५, बिहिबार
नेपाल–भारत सम्बन्ध अब सहज रुपमा अघि बढ्छ: केभी राजन
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रबार दिल्लिस्थत हैदरावाद हाउसमा औपचारिक भेटवार्ता भएको छ। वार्तापछि तीन विषयमा सम्झौता भएको छ भने २५ बुँदे संयुक्त विज्ञपती पनि जारी भएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धले अब कुन मोड लेला त? यस विषयमा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत केभी राजनसँग नेपालखबरका चन्द्रलाल गिरीले दिल्लीमा गरेको वार्ताको सम्पादित अंश:
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणले दिल्लीमा कस्तो सन्देश दिएको छ?
प्रचण्डजीको यो भ्रमणले काफी सकरात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। नेपाल र भारतका बीचमा जुन ‘मिसअन्डरस्टाण्डिङ’ थियो। त्यसलाई घटाएर विश्वासको वातवरण सृजना गर्न यस भ्रमणले मद्दत पुगेको ठानेको छु। नेपाल र भारतबीच अब सहज रुपमा अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ। अब नेपाल र भारतबीच आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप सहज हुँदै जानेछ। नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतले सहयोग बढाउनेछ। नेपाल र भारतबीच जुन विशेष सम्बन्ध छ, त्यसले गर्दा दुवै देश सम्बन्ध बलियो बनाउन संवेदनशिल भएर लागेका छन्।
तर नयाँ सहमति समझदारी केही नहुँदा प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण त सद्भावना भ्रमण जस्तो मात्र देखिएन र?
हरेक भ्रमणमा ठूल्ठूला सहमति समझदारी हुनुपर्छ भन्ने होइन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणले दुईवटा आधार तय गरेको छ। पहिलो, दुई देशबीच विश्वासको आधार खडा गरेको छ। दोस्रो, नेपालसँग विगतमा भएका सम्झौता सहमति लागू गर्ने महत्वपूर्ण समझदारी भएको छ। नेपालसँग जहिले पनि सम्झौता सहमति हुने तर लागू नहुने समस्या थियो। त्यसले जनतामा अविश्वास बढेको थियो। त्यसैले अहिलेको सुरुवात एकदमै राम्रो छ। दुवै देशका नेताहरुले गरेको सहमतिमा परिपक्वता देखिएको छ।
भारतले यसपटक पनि नेपालको संविधानलाई खुलेर स्वागत गरेन, संविधानप्रति दिल्लीको रिजर्भेसन उस्तै छ हो?
नेपालको संविधान बरेमा भारतले जे भनेपनि हस्तक्षेप हुन्छ। स्वागत गर्दा वा अपूर्ण छ भन्दा पनि। त्यसैले छिमेकीको नाताले भारतले सबै पक्षलाई संविधानमा समेटेर लैजान सुझाव दिंदै आएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले धेरै हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्न सबैलाई मिलाएर जान सुझाव दिने भन्दा अरु चासो भारतले राखेको छैन्।
मधेसी मोर्चाका माग संविधान संसोधन गरेर पूरा गरेपछि भारतीय राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने र त्यहीबेला संविधानको स्वागत गर्ने चर्चा छ, दिल्लीको सोच त्यही हो?
भविष्यमा के हुनसक्छ भनेर मैले अहिले नै केही भन्न सक्दिन। तर भारतले के अपेक्षा गर्दछ भने नेपालका सबै क्षेत्र, समूदायका जनतालाई संविधानमा समान अधिकार हुन सकोस्। सबैलाई मिलाएर नेपाली नेताहरु विश्वासका साथ अघि बढून्। बहूमत र अल्पमतको कुराभन्दा पनि आम जनताको समान अपनत्व संविधानमा हुन सकोस् भन्ने भारतको सुझाव छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा आएर सहकार्य गर्ने अवस्था होस् भन्ने भारतको सद्भाव छ।
ओली नेतृत्वको सरकार र अहिलेको सरकारप्रति भारतले फरक धारणा राखेको हो?
यी दुई सरकारलाई तुलना गर्नु उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन्। दुवै सरकार संसदबाट बहूमत प्राप्त नेपाली जनताले बनाएका सरकार हुन्। ओली सरकारसँग भारतको केही असमझदारी थियो। त्यस्तो हुँदै गर्छ। मुख्य कुरा त नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकार छ। त्यही सिस्टमबाट प्रधानमन्त्रीहरु बनेका हुन्।
पहिलेको सरकारसँग भारतको असमझदारी अब हट्यो त?
ओलीजीले पनि भारत भ्रमणमा आएर केही असमझदारी प्रष्ट गरेर जानु भएको थियो। सम्बन्धलाई सही ठाउँमा ल्याउन अहिले दुवै देश संवेदनशिल भएर काम गरिरहेको अवस्था छ। प्रचण्डजीको यस भ्रमणले झन् विश्वासको वातवरण सृजना गरेको छ। धेरै बहूआयामिक सम्बन्ध भएका छिमेकीहरुमा यदाकदा यस्तो भइरहन्छ। कहिले सम्बन्ध घनिष्ठ हुने त कहिले उतारचढाव आउने हुन्छ। यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ।
भारतले नेपालसँग जहिले पनि सुरक्षा चासो जाहेर गर्छ, त्यस्तो प्रतिकुल अवस्था छ र?
नेपालका कुनै पनि सरकार भारतको सुरक्षाको प्रतिकूल छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालका कुनै पनि सरकार भारतको हित विपरीतभ जान्छन् भन्ने पनि भारतले ठानेको छैन्। हाम्रो बीचमा त्यो प्रकारको विश्वास छ। नेपाल र भारत दुवै विकासशिल देश हुन्। दुवै मिलेर विकासमा साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डजीले पनि अनुभूति गर्नुभएको छ। खुला सीमा भएपनि सुरक्षामा नेपालप्रति भारतको भरोसा रहंदै आएको छ। खाँचो त आर्थिक साझेदारीको हो। नेपाल भारत सम्बन्धमा सुरक्षा चासो मुख्य होइन। नेपाललाई सुरक्षा परिधिको घेराबाट हेर्ने भारतको कुनै नीति छैन्। त्यो त ब्रिटिशकालीन नीति हो। दुवै देशको चाहना विकासमा सद्भाव, सहयोग र साझेदारी गर्ने हो। मलाई लाग्छ कि प्रचण्डजीलाई भारतको यो चाहना थाहा छ।
तर नेपालले चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गर्दा दिल्लीमा निकै ठूलो चर्चा भयो नि?
मलाई चीनसँग नेपालले गरेका सहमति सम्झौताको बारेमा भारतले कुनै चिन्ता र चासो लिएको भन्ने लाग्दैन्। भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि सहमति सम्झौता गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ। भारत र चीनका बीचमा पनि कतिपय व्यापारिक सहमति र सम्झौताहरु हुने गरेका छन्। नेपालले पनि चीनसँग त्यो फाइदा लिन सक्छ। नेपालका लागि चीन र भारत दुवै छिमेकी र मित्र हुन्। चीन र भारतसँग नेपालको सम्बन्धलाई तुलना गर्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन्।
उसो भए भारतको मुख्य चिन्ता के हो त नेपालमा?
नेपालसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउन भारतले जोड दिँदै आएको छ। विकासमा साझेदारी गर्ने नै मुख्य चासो हो। राजनीतिक स्थायीत्व भएन भने आर्थिक विकास हुनसक्दैन्। त्यसैले नेपालको स्थिरता भारतको हितमा छ।
प्रकाशित १ असोज २०७३, शनिबार | 2016-09-17 09:57:05
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग अन्तर्वार्ताः विकासबाट अधिनायकवाद आउँछ भने गरिवीबाट समाजवाद आउँछ?
‘एण्टी करेन्ट मुभ’ मा जाने अवसर तपाईं (ओली र प्रचण्ड) हरुलाई छ। दुबै जनाले रछ्यानमा बसेर जुठो नखोतल्नुस्, जनताको चाहना के छ, कार्यकर्ताको के छ,...
चिनियाँ जहाज सञ्चालनमा ल्याउन पाइलट खोज्नका साथै निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सकिन्छ कि भनेर साेचिरहेका छाैं
उर्जामन्त्री पुनसँग वार्ताः चीनसँग रेलमार्ग, उर्जा सहयोग र पारबहन सम्झौता हुँदैछ (भिडियो)
‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन, उर्जा सहयोग, रेलमार्ग र पारबहन सम्झौताको तयारी गरिएको छ।’
बामदेव गौतमसँग अन्तर्वार्ताः ओली वाम विमानको मास्टर पाइलट, प्रचण्ड पाइलट, हामी को-पाइलट
केपीसँग त मेरो ‘दोस्ताना’ हो, त्यस्तो ‘दोस्ताना’ माधबसँग कहिलेपनि भएन। सँगै रक्सी खानेदेखि लिएर रुनेसम्म हामीले गर्‍यौं। मलाई कार्वाहीको माग...
देउवाको दरबारमोह अझै किन टुङ्गिएन?: कृष्ण सिटौला (भिडियाे अन्तर्वार्ता)
सभापतिजस्तो मान्छेले यस्तो हल्काफुल्का कुरा गर्नुहुँदैन। उहाँले यस्तै हल्काफुल्का कुरा गरेकाले पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको हो। बेमौसम...
बेइजिङ, साउन २ - उच्च सुरक्षा सतर्कताका लागि बेइजिङको नयाँ विमानस्थलमा फेसियल रिकग्निसन (अनुहार चिन्ने) प्रविधी अपनाइने भएको छ।
अभिनेतृ स्वेता भन्छिन्–लाइफमा पार्टनर त चाहिन्छ
निद्रामै निल्यो पहिरोले
अनुसन्धान समितिले किन पत्ता लगाउन सकेन तस्करीको सुन ?
गोविन्द केसीलाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याउने तयारी
नेपाल-भारत सीमामा परिचयपत्रको प्रस्ताव
बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने सरकारी योजना उपयुक्त छ। प्राधिकरणलाई कानुनले नै अधिकार दिएर पठाइसकेपछि नियामक निकाय बलियो हुन्छ र कानुन बमोजिम गर्न...
एेतिहासिक एक दिवशीय श्रृंखला यादगार बनाउने चुनौती (भिडियो/फोटो)
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक एक दिवसीय अन्तराष्ट्रिय(ओडिआई) क्रिकेट श्रृंखलाको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।